9 एकाग्रता कला को मास्टर को लागि युक्तिहरु
मैले बुझें। कक्षा बोरिंग पाउन सक्छ र तपाईं विचलित हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंको प्रोफेसर लामो समयसम्म चिसो छ, तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथी उल्लङ्घन हो, वा तपाईको सेल फोन बन्द रहन्छ। तर कसरी कक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न राम्रो ग्रेड पाउने अनि (ड्रमरोल) गर्न जरूरी छ ... वास्तवमा केहि सिक्न। यो साचो हो! यहाँ सङ्कलनहरू धेरै ह्यान्डल गर्न धेरै जस्तो देखिन्छ जस्तो कक्षामा कसरी ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि यहाँ केही सुझावहरू छन्।
सफल विद्यार्थीहरूको थप अध्ययन योग्यता
1. अगाडिको नजिकै बस्नुहोस्
अगाडि पंक्ति केवल नर्सहरूको लागि होइन। (यद्यपि एक बेवकूफ साँच्चै छ, वास्तवमा ठुलो छ किनकि नर्सहरूले संसारमा शासन गर्ने गर्दछन्)। कक्षाको छेउमा बस्दा स्वचालित रूपमा तपाइँलाई ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ किनभने यसले तपाईंको सामने कुनै पनि विचलन (शिकारीहरू, पाठकहरू, क्यान्सर, आदि) लिन्छ।
2. भाग लिनुहोस्
मानिसहरू ध्यान केन्द्रित गर्न सिकेका व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूलाई कक्षामा सक्रिय रूपमा भाग लिन आवश्यक छ। कुराकानीमा शिक्षक संलग्न गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रश्नको लागि आफ्नो हात उठाउनुहोस्। छलफल सुरु गर्नुहोस्। अधिक व्याख्यान तपाईं व्याख्यान संग छन्, अधिक तपाईं यो ध्यान केन्द्रित गर्न चाहान्छ। त्यसैले, यो ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी मूर्ख तरीका हो। आफैलाई चासो प्राप्त गर्न ट्रिक गर्नुहोस् भले पनि तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईं हुन सक्नुहुनेछ। तपाईं आफैलाई अचम्म लाग्नु हुनेछ कि तपाई वास्तवमा तपाईलाई एक शट दिनुहुन्छ कि तपाई वास्तवमा हुनुहुन्छ। ।
3. राम्रो टिप्पणी लिनुहोस्
आफ्नो मन ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्नो कलम काम गर्दै।
धेरै भाग्यस्त्री शिक्षाहरू झन्झट हुन्छन् - तिनीहरूका मस्तिष्कले तिनीहरूसँग सुन्ने काम गर्दा तिनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छैन। यदि तपाईं ती व्यक्ति मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, र यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने यहाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईको कलम सार्नुहोस् र ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्न व्याख्यानका क्रममा राम्रो नोटहरू लिनुहोस्।
4. तपाईंको फोन बन्द गर्नुहोस्
यदि तपाइँ साँच्चै ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ भने, आफ्नो फोन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस्।
कम्पन गर्न यसलाई सेट गरेर धोखा दिने छैन! तपाईंको व्याख्याले तपाईंको एकाग्रतालाई मित्रबाट पाठ वा व्याख्यानको दौडान सोशल मिडियाबाट एक अधिसूचना भन्दा बढी जार गर्नेछ।
एक स्वस्थ नाश्ता खाओ
भोक एक ठूलो व्याकुल हुन सक्छ। यो ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो छ जब तपाईं बरु तपाइँको स्थानीय रेस्टुरेन्टमा बुफे छाप्न सक्नुहुनेछ। धेरै स्पष्ट भ्रामक छुटकारा पाउनको लागि कक्षामा हेड गर्नु अघि केहि मस्तिष्क खाना लिनुहोस्।
6. शुभ राईको निद्रा पाउनुहोस्
अधिकतम एकाग्रताको लागि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कम्तीमा आठ घण्टा सोचेको छ। मलाई थाहा छ कि यो गर्न कठिन हुन सक्छ, विशेष गरी कलेजमा, तर तपाईं थकानमा लड्नु भएको बेला तपाईको एकाग्रता लगभग चल्नेछ। केही बन्द-आँखा पाउनुहोस् ताकि तपाईं महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
7. आफैलाई इनाम दिनुहोस्
यदि तपाईसँग साँच्चै कक्षामा फोकस गर्न समस्या छ भने, त्यसपछि ध्यान दिनको लागि कक्षाको अन्त्यमा इनाम दिनुहोस्। तपाईंको मनपर्ने लट्टेमा भर्ती गर्नुहोस्, तपाईंको "जूताको लागि बचत" खातामा पाँच रकम थप गर्नुहोस्, वा तपाइँले केवल कक्षाको सम्पूर्ण अवधिमा मिनी इनाम दिनुहोस् जस्तै कि कैंडीको टुक्रा वा यदि तपाईं पन्द्रह मिनेटको लागि ध्यान राख्नुभयो भने। आफ्नो राम्रो ग्रेड को बाहेक केहि काम गर्न को लागि केहि दिनुहोस् यदि त्यो एक उत्तेजना को पर्याप्त छैन।
8. जट्टर बाहिर जानुहोस्
यदि तपाईं एक चींटी व्यक्ति हो - ती चीजहरू मध्ये एक चीजहरू - र तपाइँको शिक्षकले तपाईंलाई कक्षा कोठामा जाने अनुमति दिन सक्नुहुन्न, त्यसपछि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कक्षा भन्दा अघि आफ्नो ऊर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ। पुस्तकालय वरिपरि गोला चलाउनुहोस्। जहाँ तपाईं जानुहुन्छ सीढ़ीहरू लिनुहोस्। कक्षामा आफ्नो बाइक घुमाउनुहोस्। तपाईंको केहि ऊर्जा पहिले नै प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईं आफ्नो कक्षाको अवधिमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
9 यो परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो पर्ची सुरु गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न क्षमता महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि केही परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको बैगबाट नयाँ कलम पाउनुहोस्। तपाईंको अर्को पैदल पार गर्नुहोस्। खिच्नुहोस्। तपाईंको मांसपेशी तनाव र फिक्स गर्नुहोस्। एक पललाई आफैलाई मोटोपरीबाट छोटो ब्रेक दिनुहोस्। तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि यो ट्रयाकमा तपाईलाई कसरी राम्रो बनाउने काम गर्दछ।
6 चरणमा अध्ययन गर्न कसरी फोकस गर्ने?
Etruscans को थिए?
10 Giraffes को बारे मा रमाइलो तथ्य
हिलाबारी बुढा प्रतिमाहरू जसले तिनीहरूका प्रसिद्ध विषयहरू जस्तै केही देख्दैनन्
यू एस एस दक्षिण डकोटा (बीबी-57)
मरियम क्यासैट उद्धरण
11 बेनामी एनिमे रोमांस
शिक्षकहरूमा बिल्डिंग विश्वासको लागि रणनीति
म्याक्सिको खाडीमा समुद्री समुद्री जीवनको बारेमा तथ्य
कसरी एक कोचको वॉलीबल भर्ती गर्ने सूची
1930 मा प्लाटो पत्ता लाग्यो
सिन निकोलस डे कहिले हुन्छ?
गेहूं कलेज प्रवेश
कसरी Microsoft Access 2013 स्थापना गर्ने
9 स्मरणार्थी दिवसहरू कविता र भाषणहरूबाट लिइएको
लाइटनिंग र लाइटनिंग
स्पेसशिप पृथ्वी र भविष्यका सपनाहरु
लियोनिडास को कुरा
स्मार्ट विकास के हो?
चर्चमा निक्षेपको लागि कसरी4ईसाईको ईमानदारी
द्वितीय विश्व युद्ध: लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स एम। गेभिन